Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano - Iphrofayili Yesikweletu Sabadala
Isipiliyoni sibika imisebenzi yesikweletu sebhizinisi evela kubahlinzeki bezikweletu, izikhungo zezezimali ezihweba, izinkampani ezinkulu eziqashisa ngezinto nokunye. I-uzoefu yinto ebalulekile kakhulu ekukhuleni isikweletu sebhizinisi. Kuze kube manje sihamba nge-Dun neBradstreet ne-Experian, ingxenye elandelayo yi-Equifax.
Sesha Inkampani Yakho E-Studan
Yenza ukusesha kwenkampani nge-Experian futhi ubone ukuthi inkampani yakho isivele inephrofayili eyakhiwe yini. Yenza usesho ngegama lenkampani, ungasusa isikhombi sakho sebhizinisi, ie "Inc", "Corp", "LLC", enkambini yokusesha futhi unikeze ngemininingwane yendawo yakho. Uzobona uhlu lwemiphumela olufana nanoma yiliphi igama egameni lenkampani yakho. Uma uthola igama lenkampani yakho, usuvele unephrofayli ngokubikwa kwemali yesikweletu ye-Experian yenkampani.
Thenga Umbiko Wezikweletu Wenkampani
Ungathenga umbiko wesikweletu kunoma iyiphi inkampani etholakalayo lapho usesha ku-Portan.com. Izindleko zincike kumbiko owukhethayo.
Umbiko Wezikweletu - $ 24.95 futhi ihlinzeka ngesikweletu se-Experian yesikweletu, imininingwane yokugcwalisa i-UCC, noma iyiphi idatha yamaqoqo kanye nesifinyezo sobhaliso lwebhizinisi. Isampula Yombiko Wezikweletu Webhizinisi Lesipiliyoni
Umbiko Wephrofayili Futhi - $ 49.95 futhi ihlinzeka lonke lolu lwazi olutholakala kumbiko we-Score Score kanye nemibandela yokukhokha nanoma yiziphi izinsuku ezingekho futhi imigqa yokuhweba enezimo zokukhokha. Isampula Yombiko Wephrofayili Yesikweletu Sasebhizinisi Ebonakalayo
Uhlelo lokuvikela i-CreditInsur - $ 99.00 ngonyaka noma i- $ 12.95 ngenyanga efaka umbiko we-CreditInsure, oqukethe imininingwane ephelele yebhizinisi ngokufinyelela okungenamkhawulo kuyo ngeminye imininingwane.
Uma ungenayo iphrofayli futhi ungakwazi ukudonsa imibiko evela ku-Experian, ungakhathazeki, iphrofayela yakho yesikweletu enobumbano ne-Experian izokhula uma unemigqa evulekile yokubika isikweletu ku-Experian. Uma ususungule isikweletu sebhizinisi, kuwumkhuba omuhle ukubheka umbiko wakho we-Experian njalo ezinyangeni ezimbalwa ukuqinisekisa ukunemba.
>> Qhubekela Esinyakazweni Esilandelayo ekwakheni Ikhredithi Yezimali - I-Equifax >>